သွေးတိုးရောဂါအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန် - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » သွေးတိုးရောဂါ » သွေးတိုးရောဂါအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်
နှလုံးနဲ့သွေးကြောလေ့ကျင့်ခန်းများ/အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများစတာတွေကသင့်ရဲ့သွေးတိုးကိုကျစေပြီးသင့်ရဲ့နှလုံးကိုပိုပြီးသန်မာစေပါတယ်။ဥပမာ – လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ကြိုးခုန်ခြင်း၊စက်ဘီးစီးခြင်း၊စကိတ်စီးခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်း၊အေရိုးဗစ်ရေကူးခြင်းနဲ့ ရေထဲတွင်အေရိုးဗစ်ကစားခြင်း
တကယ်လို့သင်ကဒီနေ့ထိလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသိပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ကပမာဏအထိ ဖြည်းဖြည်းချင်းလေ့ကျင့်သွားပါ။ အဲဒီလောက်ထိရောက်ဖို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ပထမဆုံး သွေးပူအောင်လုပ်ပါ။၅မိနစ်ကနေ၁၀မိနစ်အထိ သွေးပူစေခြင်းကသင့်ရဲ့ကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားရပိုအဆင်ပြေစေတဲ့အပြင်အနာတရဖြစ်ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအပျော့ကိုချိန်ဆပါ။ အလွန်အကျွံမလုပ်ပါနဲ့။ သင့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်စကားပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရပါမယ်။ သီချင်းပါဆိုနိုင်သေးရင်တော့နည်းနည်းပိုလုပ်ပါ။
တက်တက်ကြွကြွနေခြင်းက သွေးတိုးရှိသူအတွက်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကိုသင်ကန့်သတ်ထားရမယ့်ပမာဏရှိလားမေးထားပါ။
ဒါပေမယ့် အသက်ရှူအရမ်းကျပ်တာ၊နှလုံးခုန်အရမ်းမြန်တာ၊ နှလုံးခုန်မူမမှန်တာတို့ခံစားရရင်တော့အရှိန်လျော့ပြီးနားလိုက်ပါ။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ပျော့ခွေခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်းနဲ့လည်ပင်း၊လက်မောင်း၊ မေးရိုး၊ပုခုံးတွေမှာနာတာတွေဖြစ်လာရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာရပ်လိုက်ပါ။
Exercise: A drug-free approach to lowering high blood pressure. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood- pressure/in-depth/high- blood-pressure/art- 20045206?pg=1. Accessed 12 Sep 2016
Exercise Tips for Those With High Blood Pressure. http://www.webmd.com/hypertension-high- blood-pressure/safe-exercise- tips#1. Accessed 12 Sep 2016